सविनको नामको ट्याटुबारे प्रश्न बर्षिएपछि लजाईन अनु, के दिए सविनले शिल्पा र अनुलाई यस्तो उपहार ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityसविनको नामको ट्याटुबारे प्रश्न बर्षिएपछि लजाईन अनु, के दिए सविनले शिल्पा र अनुलाई यस्तो उपहार ? (भिडियो)
May 12, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Female, Kollywood, Model, News, Videos 0
अभिनेता सविन श्रेष्ठले मावाईल मर्मत केन्द्र तथा ‘स्टाएल’ मोवाईलको ‘सो रुम’ सुरुवात गरेका छन् । शनिबार नेपाली सिने जगतकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल तथा मोडल अनु शाहले उक्त मोवाईल सेन्टरको रिवन काटेर औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । मोवाईल सो रुम कार्यक्रममा उपस्थित अभिनेत्री शिल्पा तथा अनुले मर्मत केन्द्र तथा सो रुमको व्यापारिक सफल्ताको कामना समेत गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा उपस्थित सञ्चारकर्मीले सविन र अनुलाई उनीहरुको सम्बन्धको बारेमा जति नै प्रश्न गरे पनि दुबै जनाले आफूहरुको सम्बन्ध असल साथीको मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सञ्चारकर्मीले अनुलाई सविरको नाममा ट्याटु खोपेको बारेमा प्रश्न गर्दा उनले लजाउदै अस्वीकार गरिन् । अत्यमा कार्यक्रममा उपस्थित दुबै नायिकालाई एक–एकवटा मोवाईल सेट तथा गिफ्ट ह्याम्पर उपहार समेत दिईएको थियो ।